Nweta Nkà Ọrụ Na Hodges Direct, Otu Nkewa nke Mahadum Hodges
Categories: Hodges Kpọtụrụ
Nabata HU Direct, Otu Express Division nke Mahadum Hodges
Mahadum Hodges na-enye asambodo ndị a na-eduzi ndị ọrụ na ogo ndị a na-achọ na mpaghara ahụ na karịa. Mpaghara gụnyere ahụike, teknụzụ, azụmaahịa, njikwa, na ego. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịga klaasị na kampos, n'ịntanetị, yana site na Teknụzụ Teknụzụ Teknụzụ Anyị (TEC), nke na-enye ha ohere ịga klaasị site na ebe ọ bụla, na-ebi n'ịntanetị. Mahadum Hodges na-enyekwa ọpụrụiche Asụsụ Bekee dị ka mmemme asambodo nke abụọ (ESL).
Bido na ebe Lehigh Acres Goodwill, HU Direct ga-enwe ohere ịbanye na klaasị na ụlọ ọrụ onye nkuzi, nke dị na Lehigh Acres, na Goodwill's CRC. Enwere ike ịme klas na ebe obibi na obodo Lehigh Acres na ụbọchị na oge kachasị mma maka ndị bi n'obodo ahụ. A maara Mahadum Hodges maka ọkachamara na ndị mmụta toro eto, ọ bụ ya mere eji eme ọtụtụ mmemme na mgbede na ngwụsị izu na kampos, ma ọ bụ n'ịntanetị.
Njikọ a na-atụghị anya ya - Mahadum Hodges na wlọ Ọrụ Ọmịiko
Na mbido, ị nwere ike ịdị ka Mahadum Hodges na Wlọ ọrụ Ọma nke Southwest Florida agaghị enwe ọtụtụ ihe. Agbanyeghị, na otu abụọ a na-arụkọ ọrụ ọnụ, anyị nwere ike ịkwado mkpa ọzụzụ ndị ọrụ na mpaghara anyị.
Ma Goodwill na Mahadum Hodges na-arụsi ọrụ ike ka ha wee nwee ike ịnweta ya, mana enwere ụzọ ọzọ iji mee nke ahụ na ọkwa ọzọ. Ihe ọma na-enye mmalite siri ike maka ndị na-achọ ịmalite ma ọ bụ gbanwee ọrụ n'ihi ọgba aghara nke COVID-19 kpatara. Mahadum Hodges amalitela atụmatụ ọhụrụ akpọrọ HU Direct, Otu Express Division nke Mahadum Hodges.
Njikọ a na-ewetara ndị bi na agụmakwụkwọ na ndị ọrụ ọzụzụ ọzụzụ ohere, n'otu n'otu n'obodo ha.
Kpọtụrụ anyị taa maka nkọwa ndị ọzọ!
HU Kpọtụrụ Gị?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgbasa ebe ọrụ gị, mgbe ahụ HU Direct bụ maka Gị!
Kedu usoro nkuzi dị na Hodges Direct?
Klaasị ga-adị abalị na ngwụsị izu na Goodwill Industries Lehigh Acres Community Resource Centres (CRC) Ebe. Usoro ọmụmụ ga-agụnye:
Bekee Dị Ka Asụsụ Nke Abụọ
English ramtọ asụsụ Online
Onye Nlekọta Uzo mbu
Ọkachamara na Ọrụ
Athzọ aga-enweta nke Homelọ
Direct Nkwado ọkachamara
Onyinye kachasị ụgwọ anyị bụ ịhụ olile anya ahụ na ntụkwasị obi ọhụrụ ka ụmụ akwụkwọ na-enweta ihe ọmụma na nka ọhụụ ga-enyere ha aka imezu nrọ ha. Ọ bụ mmetụta dị mma nke ga-aga n'ihu maka ọgbọ niile.